Laysanka baabuurka (körkort) oo noqday furaha shaqada | Somaliska
Laysanka baabuurka ayaa caqabad weyn ku noqday dhalinyaro badan oo shaqo raadis ah, sida lagu sheegay warbixin dheer oo uu soo daabacay wargeyska SvD. Qaadashada körkortka ayaa la sheegay in ay ku baxayso 15000kr taasoo aysan awoodin dadka aan shaqada haysan.
Dhinaca kale shirkadaha ayaa shuruuda laysanka waxay ka dhigeen mid aad u weyn si ay shaqo u bixiyaan. Labadaan arimood ee iskhilaafsan ayaa abuuray in dadka shaqo la’aanta ah ee aan körkort haysan ay hada yihiin ku dhawaad 3 meelood 2 meel. Dadkaas ayaa da’dooda u dhaxaysa 18-24 sano.
Xafiiska Shaqada (Arbetsförmedlingen) ayaa sheegay in dadka ugu badan ee shaqo la’aanta haysato ay yihiin kuwa aan laysanka haysan. Maadaama shaqooyinka hoose ay u baahanyihiin in qofku meel wax ka qaado ama meel geeyo iwm ayaa waxaa waajib ah in qofku laysan haysto. Shaqooyinkaas ayay u badanyihiin kuwa ay qabtaan dhalinyarada iyo dadka soo galootiga ah. Xafiiska Shaqada ayaa soo bandhigay dhalinyarada shaqo la’aanta ah ee u diiwan gashan kuwaasoo gaaraya 140 000 qof. Tiradaas ayaa waxaan laysan lahayn 81 619 qof.
Dhibaatada ugu weyn ee dhalinyarada ka haysata qaadashada Laysanka ayaa ah dhaqaale la’aan. Dhinaca Soomaalida marka laga eego ayay dhibaatadu isugu jirtaa mid dhaqaale iyo mid luuqadeed maadaama uu adagyahay imtixaanka teoriga.
Shirkadaha shaqada bixiya ayaa iyaga xaalada sii adkaynaya. Hay’ada lagu magacaabo Svenskt Näringsliv ayaa baaritaan ay samaysay waxay ilaa 300 oo shirkadood waydiisay shuruuda ay ku qaadanayaan shaqaalaha hoose. Kala bar shirkadahaas ayaa ku jawaabay Körkort. Arinta la yaabka leh ayaa ah in shirkadahaas ay xitaa sheegeen in qofka ay waayo aragnimadiisu hoosayso laga cafin karo balse Laysan la’aan aan marnaba la qaadan karin.
Shaqooyinka ugu badan ee shuruuda looga dhigo laysanka ayaa waxaa u baadan, shaqooyinka dukaamada, nadaafada, dhismada, daryeelka guryaha iyo amaanka. Shaqooyinkaas ayaa waxay yihiin kuwa ugu badan ee ku haboon dhalinyarada iyo dadka aan lahayn waxbarasho qotodheer.
Warbixintaan ayaa muujinaysa muhiimada uu leeyahay Laysanka. Muhiimadaas ayaa ah mid aan horay u aqoonsaday aniga laftayda oo aan hada ku guda jiro diyaarinta koorso teori ah oo Af-Soomaali lagu sharaxay. Qaadashada Körkortka ayaa la dhihi karaa waxay ka muhiimsantahay SFI-ga ama la midtahay. Marka qofku uu Körkort qaato ayaa waxaa u furmaya fursado badan oo xaga shaqooyinka ah iyo in uu sii qaato Laysanada kale sida Baska, Taksiga, baabuurta xamuulka iwm.
asc wr wb walal dadka lagu xujenaya shaqada in ay hestaan licen ma raga oo kaliyaa mise dumarka weykujiraaan tas bal ishega hada iga aqoon roontihin
dumar iyo raagbaa shaqa la.antaa waa haysaa haday ruun sheegayaa may gratis ka dhigaan teori amaa qaymaha uhada yahay wax un kadhimaan cidan lesenkooda ad ayuu u adagyahay
asc sxb waxan layabanahay anniga tadyoowga wadankan sokalay luqada carabiga hada leesinga walaku qadan karaa oo bumbudarga wey ku jirda sxb maa soomali inda isku xerando eey ku doodan si eey luuqadooda uku maraan iyakane si gumbudarga luuqada tadkan aqoon eey uku fududaado